Yakakwira Frequency Induction Brazing Copper kune Stainless Simbi Muitiro
Yakakwira Frequency Induction Brazing Copper kune Stainless Isimbi Process Technology
Chinangwa cheiyi induction ichipenya ndarira kune isimbi isina simbi uchishandisa DW-UHF-40kw induction yekupisa magetsi neyetsika tsika yekudziya
DW-UHF-40KW Induction Kuchenesa Simba Rokugovera
Simba: 23.65 kW
Kupisa: Zvinosvika gumi nemashanu°F (704)°C
Nguva: 3.5 mins
0.5 ″ Kukura Kwemadziro
Stainless Simbi 4, OD
Kuti titange kupinza kucherechedzwa kwemhangura kune simbi isina chigadziko chikamu chaive chakatenderwa pane turntable. The induction brazing coils yakazoiswa pamhepo yakapendana nekuti haina kupisa kwazvo pane simbi isinei nesimbi. Sezvo chikamu ichi chaitenderera, dzinenge 25kW dzaive dzichiiswa kune coil. Pakangosunganidzwa gonhi raive padyo nekushisa chaiko kwakasviba, svutugadzike yakaiswa mumaoko Iko kufambiswa kwekushandira mubatanidzwa kune isimbi isina chigadzirwa kwakapera uye kwakabudirira.
Mhedzisiro ye kuburitsa kusungurudza mhangura kune yesimbi yesimbi application test yaive yakanaka, iyo kuburitsa kusungurudza yakapera kuvakwa uye iyo mhangura yesimbi isingaitwe yakagadzirwa pasina mushe. Iyi bvunzo yakaguma nekumhando yepamusoro uye kudzokorora kwemajoini, uye kuwedzera simba nekudzora nguva uye tembiricha.
Categories Technologies Tags brazing mhangura, brazing mhangura system, brazing mhangura yesimbi, ndarira kune simbi isina tsvina, ndarira kune isina stainless simbi HF yekutarisa, HF muchina wekutarisa, HF induction brazing, high frequency brazing, High frequency Brazing copper, kuburitsa kusungurudza Post navigation